Kazakhstan: “Fahadisoana Ara-Antontanisa”, Tantaran-Kolikoly Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: “Fahadisoana Ara-Antontanisa”, Tantaran-Kolikoly Vaovao
Voadika ny 15 Jolay 2017 9:35 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka efa tamin'ny volana Jiona 2009 ity adika eto ity)
Nosazian'ny fitsarana Kazakhstan omaly ny fisamborana an'i Nurman Bayanov, Filoha lefitry ny Sampan'ny Antontanisa misahana ny fanodikodinana ny vola nomena ny fanisam-bahoakam-pirenena [ru]:
“7,6 tapitrisa dolara no natokana ho an'ny fanisam-bahoaka. Vokatry ny fanadihadiana, hita fa 2,2 tapitrisa dolara ihany no nolaniana tamin'ity tetikasa ity. Niodina ny vola ambiny”.
Ankoatra izany, filoha lefitra iray hafa ao amin'ny Sampan-dRaharahan'ny antontan'isa sy mpandraharaha malaza roa – Serik Turzhanov ny iray, izay Filoha lefitry ny Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria sady olom-panjakana malaza – no nosamborina ihany koa satria voalaza fa mpiray tsikombakomba.
Mikasika izany, manontany tena i Megakhuimyak [ru] hoe:
Tamin'ny vola 7,6 tapitrisa dolara natokana ho an'ny fanisam-bahoakam-pirenena, 5,4 tapitrisa dolara no nangalarina, ahoana no niovan'ny refim-pisoroham-pahadisoana (matetika eo amin'ny 2-3% izany)?
Tsy mahagaga an'i pycm [ru] ity vaovao ity:
Eny, azo ampoizina izany, raha mijery ny fomba ratsy nanatontosàna ny fanisam-bahoaka tamin'ity taona ity.
Nampahatsiahy ihany koa izy hoe:
Ankoatra izany, 72 taona niala ny taona 1937 isika [ny tampon'ny famoretan'i J. Stalin]. Enina ampitomboina roambin'ny folo ny 72. Tsy misy misitery somary hafahafa sy miverimberina ve?
Dass nanamarika fa [ru]:
Raha misy manam-pahefana ambony eto amin'ny firenentsika voampanga amin'ny kolikoly, fanamparam-pahefana, halatra sns, manomboka mihevitra ho azy ny olona sasany fa gadra politika izany olona izany. Mihevitra izy ireo hoe: “Nahoana no io lehilahy io mihitsy no nokendrena, raha toa ka manao izany daholo ny olona rehetra [eo amin'ny fitondrana]?”. Tsy mahagaga raha avy amin'izany fomba fijery izany, raisina ho fizaram-pananana hafa indray na famoretana ny mpanohitra ny tena hetsika ady amin'ny kolikoly.
Mandritra izany fotoana izany, thousand-pa nanamarika tamin'ny fomba miiba hoe [ru]:
Ny rafitra manontolon'ny rafi-panjakana ankehitriny no mandray anjara amin'ny famoretana, ary izay ahiahy amin'ny fanaovan-dratsy dia heverina ho toy ny marika “Hazalambo!”. Raha vao lazaina ny “Hazalambo!”, tsy misy afaka manakana ny manampahefana hanasazy olona. Manasazy an-kafanam-po ny fitondrana, satria manodina ny volam-panjakana izy. Inona koa no azonao antenaina avy amin'ny firenena izay ravina aviavy mandrakotra ny tombontsoa goavan'ny vondrona vitsy an'isa ny “lalàna sy ny didy?
Nalefa tao amin'ny neweurasia ihany koa ny lahatsoratra:
Azerbaijan 6 andro izay